တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အထင်ကရ နေရာတစ်ခု တည်ဆောက်မည့် အပန်းဖြေစခန်းငယ် Design တစ်ခု - Myanmar Builders Guide
တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အထင်ကရ နေရာတစ်ခု မှာ တည်ဆောက်ခွင့်ရရင် တည်ဆောက်မယ့် ပြည်သူများအတွက်အပန်းဖြေစခန်းငယ်လေးတစ်ခု အတွက် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေ ကိုယ်စွမ်း ဥာဏ်စွမ်းရှိသ၍ စနစ်တကျရေးဆွဲပုံဖော်ပြီး ဝင်ရောက် အရွေးချယ်ခံဖို့ Design တစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့ကို ချစ်တဲ့ တောင်ကြီးသား Architect တွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Design လေးပါ။
ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ ရေးဆွဲတဲ့ Design ရွေးချယ်ခံခဲ့ရရင်လဲ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ယူနေမှာပါ။
အရွေးချယ်ခံခွင့်မရခဲ့ရင်လည်း အားလုံးကိုကျေနပ်လက်ခံနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ စိတ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ။
ဒီ Design ဖြစ်လာဖို့အတွက် (၁၅)ရက်အတွင်း အစမှအဆုံးတိုင် နေ့မအားညမနား ပိတ်ရက်မရှိ တာဝန်ယူရေးဆွဲကြီးကြပ်ပေးပါသော ငယ်သူငယ်ချင်း ကိုစိုင်းလောဝ်ဆိုင် ကိုသန့်ဇော်မျိုး(???? ??????????) နှင့် အဖွဲ့သားများကို အထူးပင်ကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါတယ်။ Survey တိုင်းတာပေးတဲ့ ကိုစိုင်းစံထွန်းတို့အဖွဲ့ကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တောင်ကြီးမြို့ တိုးတက်စည်ပင်သာယာလှပရေးအတွက် တောင်ကြီးသားတွေရဲ့ မေတ္တာဖြင့်ရေးဆွဲပေးတဲ့ Design လေးပါခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ Design အရွေးခံရရင်လည်း မေတ္တာဖြင့် လှူဒါန်းမှာပါခင်ဗျာ။
SaiHom Pha (Facebook)